Kana iwe uri chikuva chiri kutumira transactionional maemail, iwe unogona kunge uchiona kuti iwo akaomeswa-makodhi kumusana-kumagumo uye zvinonetsa kugadzirisa pasina rubatsiro rwemugadziri. Transactional maemail anotumirwa kune vanhu iwe aune bhizinesi rekuita navo uye ivo havagone kutemerwa kutevedzera (izvo zvinoreva kuti ivo havadi kuzvinyoresa kubatana). Transactional kana system maemail anowanzo kwira kuvhurika uye tinya nemitero saka iwo mukana chaiwo wekushambadzira
Iva Neudyire Pamusoro Pekusazvipira Networking
Chishanu, February 12, 2010 Svondo, Kukadzi 9, 2014 Douglas Karr
Vhiki rino ndakaita hurukuro dzakaomarara nemamwe mabhizinesi andine hanya nawo zvakanyanya. Vanoziva kuti ndine hanya nekuti ndakavatorera basa uye ndiri kuvabata kuti vazvidavirire. Netiweki yangu ndeyekudyara kwangu uye kwandinowana kudzoka kuzhinji mukudyara. Makambani etekinoroji andinoshanda nawo anogara achiwana nzeve kubva kwandiri. Ini ndinogara ndichireva matambudziko, mazano uye kudos kuzvikwata zvavo. Kune munhu wese anonyunyuta, pane mazana e